इलामका महिला पनि के कम ? उद्योग खोलेर दर्जनौँलाई दिइरहेका छन् जागिर « News24 : Premium News Channel
इलामका महिला पनि के कम ? उद्योग खोलेर दर्जनौँलाई दिइरहेका छन् जागिर
इलाम । इलामको कोशेली ललिपप धेरैको रोजाइमा पर्दछ । दूधबाट बनेको ललिपप इलाम घुम्न आउने पर्यटकले घर फर्किंदा कोसेलीको रुपमा प्रायः लिएर जाने गर्दछन् ।
निकै स्वादिलो मिठाईका रुपमा लिइने ललिपप उद्योगबाट धेरै महिलाले रोजगारीसमेत पाएका छन् ।
ललिपपसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गरेर इलामका महिलाले आत्मनिर्भर मात्र हैन धेरै महिला तथा पुरुषलाई रोजगारी दिएकासमेत छन् । धेरै महिला तथा पुरुष जागिरको खोजीमा कोही नेपालमा नै त कोही रोजगारी नपाएर वैदेशिक रोजगारीमा समेत जाने गर्दछन् तर इलाममी दीपा गुरुङले धेरै महिलालाई रोजगारी दिनुभएको छ ।
सानो लगानीबाट सुरु गरेको ललिपप उद्योगबाट धेरै महिला दिदीबहिनीलाई रोजगारी दिन सफल हुनुभएको छ । इलाम तिल्केनीकी दीपाको दैनिकी अहिले निकै व्यस्त छ ।
आठ वर्ष पहिले उहाँले स्थापना गरेको ग्रिनसिटी ललिपप उद्योगमा अहिले ४६ महिलाले रोजगारी पाउनुभएको छ ।
बिहान ४ बजेदेखि राति अबेरसम्म उहाँ काममा नै व्यस्त रहनुहुन्छ । उहाँको उद्योगबाट ललिपप र बम्बैसन बन्ने गर्दछ ।
इलाममा मात्र सीमित ललिपप र बम्बैसन पछिल्लो समय काठमाडौँसम्म पुग्ने गरेको छ । ६ जनाबाट सुरु भएको उहाँको उद्योगमा अहिले ४६ जना महिलाले दैनिक काम गर्छन् । रु पाँच लाखबाट सुरु भएको उहाँको उद्योगले अहिले वार्षिक रु ३५ लाखसम्म कमाइ गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै इलाम बजार नजिकै सुष्मा राईले पनि इलामेली ललिपप उद्योग स्थापना गर्नुभएको हो । उहाँले पनि ३४ जना कामदार राखेर सो उद्योग सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ ।
रु चार लाखको लागतबाट सुरु भएको व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी हुने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । थोरै लगानीबाट सुरु भएको उद्योगमा धेरै महिलाले रोजगारी पाएसँगै उहाँहरु आत्मनिर्भरसमेत बन्दै जानुभएको छ ।
उद्योगमा सबैलाई कामको बाँडफाँट गरिएको छ । मिठाईका परिकारमा लेबल लगाउने, स्टिकर टास्ने, प्याकेजिङ गर्ने काममा महिला दिदीबहिनीले रोजगारी पाउनुभएको छ ।
गाउँबाट बालबच्चा पढाउन सदरमुकाम बसेका महिलासमेत सो उद्योगबाट स्वरोजगार बन्दै जानुभएको छ । उहाँहरुले श्रीमान् वा आफन्तबाट पैसा माग्न नपर्ने गरेको बताउनुभएको छ । बरु उल्टै परिवारमा पैसा सरसहयोग गर्न पाएको भन्दै खुसीसमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
दूधबाट खुवा तयार पारेपछि ललिपप बनाइन्छ । ललिपपसँगै बम्बैसन पनि तयार पारिन्छ । १५ वर्ष पहिले सामान्यरुपमा बिक्री हुने ललिपप पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
दूध पकाउन चुला बनाएर आगोबाट गरिँदै आएको भए पनि पछिल्लो विद्युतीय प्रविधिबाट समेत दूध सुकाएर कुराउनी निर्माण गरिन्छ । दूध फटाएर छुर्पी, चिज, सेतो रसबरीलगायतका परिकार बनाइन्छ ।
हाल ललिपपलगायत दूधजन्य वस्तुको बजारमा समस्या नभएका कारण यस क्षेत्रमा जिल्लावासीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्यासमेत बढ्दै गएको छ ।
कतिपय युवायुवती बेरोजगार बनेर विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा इलामका ललिपप उद्योगले धेरैलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणमा धेरै मार खाएका यी उद्योगलाई टिकाइ राख्न राज्यका सम्बन्धित निकायले भने ध्यान दिन नसकिरहेको उद्योगीको भनाइ छ ।
जिल्लामा अनुदानका केही कार्यक्रम आए पनि वास्तविक व्यक्तिसम्म पुग्न नसकेको उद्योगीको गुनासो छ ।
यस विषयमा समेत सम्बन्धित निकायले सोच्न आवश्यक छ ।
रोल्पाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सपथ ग्रहण गरे
एलबी मगर रोल्पा । रोल्पाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले बिहिवार एक कार्यक्रमकाबीच पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण
खोलामा डुबेर रामपुरमा युवकको मृत्यु
रामपुर । तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित तिनाउ खोलामा फोटो खिच्ने क्रममा सिद्धार्थ नगरपालिका–१० का ३६ वर्षीय
झापाको रामचोकमा ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
युवराज आचार्य, झापा । ट्रकको ठक्करबाट झापामा एक ब्यक्तिको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा
काँकरभिट्टाबाट रु २८ लाख बढीको सुनसहित एक जना पक्राउ
युवराज आचार्य, झापा । नेपालको पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा अवैधरुपमा भारतबाट नेपाल भित्र्याउँदै गरेको रु २८